मेरो जित निश्चित छ, विकास हेर्न गोरखा जाउ भन्ने बनाउँछु : राजेन्द्र बजगाई – SamajKhabar.com
मेरो जित निश्चित छ, विकास हेर्न गोरखा जाउ भन्ने बनाउँछु : राजेन्द्र बजगाई
संबाददाता : Samaj Khabar प्रकाशित मिति: २७ कार्तिक २०७४, सोमबार १५:५१
पहिलो चरणमा निर्वाचन हुनेमध्ये सबैभन्दा चर्चामा रहेको जिल्ला हो गोरखा । वाम गठबन्धनका विरुद्ध नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्ति पार्टीले तालमेल गरेपनि गोरखामा वामगठबन्धन समस्यामा परेको छ । नयाँ शक्तिका संयोजक डा.बाबुराम भट्टराई र कांग्रेसका पूर्व प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठ प्रतिनिधिसभामा उम्मेदवार छन् । यी दुई संगै चर्चाको केन्द्रमा छन्, युवा नेता राजेन्द्र बजगाई । नेपालको उद्यम क्षेत्रमा नाम कहलाएका राजेन्द्र बजगाई विकासका लागि राजनीतिको नारसहित गोरखा क्षेत्र नम्बर १ ख बाट प्रदेशसभा सदस्यका लागि चुनावी मैदानमा होमिएका छन् । सयौं गोर्खाली युवालाई प्रत्यक्ष रोजगारीको अवसर दिएका तथा गोरखाको विकास निर्माणका लागि अहोरात्र खटिएका राजेन्द्र निर्वाचन जित्नेमा ढुक्क छन् । उनको उम्मेदवारीले नेपाली काँग्रेस र नयाँ शक्तिका मात्रै नभई अन्य पार्टीका युवाहरु पनि उत्साहित बनेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै राजेन्द्र बजगाईको चुनावी एजेण्डा र समसामयिक राजनीतिका बारेमा गरिएको कुराकानी — :
यतिबेला विश्वभरका नेपालीको ध्यान गोरखामा केन्द्रीत छ । गोरखाबाटै प्रदेशसभाको सदस्यका लागि उम्मेदवार बन्नुभएको छ । चुनावी माहोल कस्तो पाउनुभयो ?
– गोरखा अहिलेमात्रै होइन ईतिहासदेखि नै नेपालको केन्द्रभूमि हो । आजको समग्र नेपाल ईतिहासको गोरखा राज्यको संकल्पको उपज हो । स्वभाविक रुपमा निर्वाचन, तालमेल र प्रतिस्प्रधा जस्ता विषयले यसलाई फेरि चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ । म नेपाली कांग्रेसबाट गोरखा क्षेत्र नम्बर १ को ख मा प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार रहेको छु । गोरखामा नयाँ शक्ति नेपालसंग कांग्रेसबीच गठबन्धन भएको छ । संयुक्त रुपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि अब हामी चुनावी प्रचारप्रसार र भेटघाटमा जुटेका छौं । जनचाहना के छ र त्यसका लागि हामीले के–के गर्न सक्छौं त्यसको तयारीमा जुटेका छौं । निर्वाचनप्रति जनताको उत्साह धेरै छ । अझ नेपाली कांग्रेस र मेरो उम्मेदवारीप्रति गोरखाबासीले दिनुभएको हौसलाले उत्साहित बनाएको छ ।
वामगठबन्धनका कारण गोरखामा कांग्रेसको उपस्थिति कमजोर रहेको आकलन भईरहेको छ । कांग्रेसको उम्मेदवारको रुपमा के भन्नुहुन्छ ?
– यो विल्कुल सतही तर्क हो । गोरखामा कांग्रेस कहिल्यै कमजोर थिएन । विगतको संविधानसभा निर्वाचनको परिणाममात्रै गोरखामा कांग्रेसको शक्ति नाप्ने माध्यम होइन । हालै स्थानीय तहको परिणाम हेर्नुभयो भने कांग्रेस सबैभन्दा अगाडि छ । वामगठबन्धन त हारबाट त्रसितहरुको ‘मेलमिलाप’ मात्रै हो । वामगठबन्धन नेपालको राजनीतिक व्यवस्था र आम जनताको विकासको चाहनाका विरुद्ध छ । अझ गोरखाका विवेकशील र विकासप्रेमी जनता सधैं लोकतन्त्रका पक्षमा उभिएका छन् । यसपटकको निर्वाचन परिणाममा गोरखाले वाम एकतालाई अस्वीकृत गर्नेछ ।
निर्वाचन जितेको खण्डमा ५ वर्ष प्रदेश सांसदका रुपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँको एजेण्डा के छ ?
– हेर्नुस म कोरा सपना देखाएर जनता छल्ने मान्छे होइन । म त्यतिमात्रै बोल्छु जति म पुर्याउन सक्छु । मेरो पृष्ठभूमि एक कर्मठ युवा उद्यमीको रुपमा रहेको छ । काम नगरी देश बन्दैन भन्ने राम्रोसंग थाहा छ । रेमिट्यान्सले धानेको देशमा गोरखा पनि युवाहरुको पलायनबाट अछुतो छैन । धेरै गोर्खालीहरु विदेशमा परिश्रम गरिरहेका छन् । उनीहरुलाई स्वदेशमै, अझ गोरखामै रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकीलाई छिट्टै निर्माण गर्नुपर्छ । पयर्टन गोरखाको महत्वपूर्ण सम्भावना हो । काठमाडौंबाट बाहिरिएको पर्यटकलाई मनकामना दर्शन गराउँदै गोरखा, मनास्लु घुमाएर मात्रै पोखरा पठाउन सक्नेगरी काम गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक सडक विकासको पहिलो शर्त हो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेको ‘रोड कम फस्र्ट’ को अवधारणलाई अगाडि बढाउने मेरो योजना छ । यिनै कुराले समृद्ध गोरखाको आधार निर्माण गर्दछ । ‘विकासका लागि राजनीति’ मेरो अभियान हो । गोरखामा यको सफल कार्यान्वयन गरेरै देशभरी अनुकरण गर्ने वातावरण बनाउन मेरो प्रयास रहनेछ ।
गोरखामा नेपाली कांग्रेस र नयाँ शक्तिको गठन्धनलाई अस्वभाविक भन्छन् नि ?
– राजनीतिमा सबै कुरा स्वभाविक मान्नुपर्छ । एउटा सैद्धान्तिक जगमा उभिने सन्दर्भमा डा. बाबुराम भट्टराई र हाम्रा बीचमा फरक मत छ । तर विकासका एजेण्डामा हामी धेरै नजिक छौं । विगतमा बाबुरामजीले गरेका विकासका कामहरु सकरात्मक नै छन् । निर्वाचनलाई मात्रै हेर्ने हो भने गठबन्धन चुनाव हारजितका लागि मात्रै गरेको जस्तो देखिन्छ । यथार्थमा बाबुरामजीलाई कांग्रेसले समर्थन गर्नु र उहाँहरुले हामीलाई समर्थन गर्नु सम्भावित क्षतिलाई रोक्ने संयुक्त प्रयासका रुपमा बुझ्नुपर्छ । वामगठबन्धनबाट मुलुकको हित हुँदैन भन्ने सबैभन्दा धेरै बुझेको व्यक्ति बाबुरामजी नै भएकोले उहाँ अघि बढ्नु स्वभाविक छ । कांग्रेस उहाँजत्तिको नेतालाई समथर्न गरेर विकास र समृद्धिका लागि उहाँको सीपको उपयोग होस् भन्ने चाहन्छ । यो गठबन्धन स्वभाविक र जितका लागि पर्याप्त छ ।
राजनीतिक ध्रुवीकरण यत्ति धेरै बढिसकेको छ । विकासका कुरा गरेर मात्रै निर्वाचन जितिएला त ?
– जालझेलको राजनीतिबाट जनता दिक्क भईसकेका छन् । आज गोरखाको मात्रै होइन देशको कुनै पनि भूगोलको नेपालीलाई तिमी के चाहन्छौं भनेर सोध्ने हो भने उसको जवाफ हुनेछ– विकास । हो त्यही विकासलाई राजनीतिको मूल एजेण्डा बनाउन खोजेका हौं । २०४६ को परिवर्तनपछि जेजति समृद्धि र विकासका काम भए त्यो सबै नेपाली कांग्रेसले तय गरेको नीति र कार्यक्रमका जगमा भएका हुन् । यो सत्यलाई नेपाली जनताले बुझेका छन् । राजनीतिज्ञले अबपनि विकासको काम गरेन भने देश कहिल्यै बन्दैन । त्यसैले विकासका लागि राजनीति मेरो मात्रै होइन हरेक नेपालीको एजेण्डा हो ।
संविधान कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आम निर्वाचनमा सबै नेपालीको उपस्थितिका लागि आह्वान गर्दछु । नेता चुन्ने बेला कमजोरी भयो भने देश बन्दैन । त्यसैले निर्वाचनका लागि जति समय छ त्यो समयको सदुपयोग मतदाताले पनि गर्नुपर्छ । लोकतन्त्र र समृद्धिका पक्षमा उभिनेहरुलाई चिन्न सक्नुपर्छ । मलाई लाग्छ आसन्न निर्वाचनमा हरेक मत विकासका पक्षमा खस्नेछ । त्यही मतको जगमा नेपाल समृद्ध बन्नेछ ।
२७ कार्तिक २०७४, सोमबार १५:५१ मा प्रकाशित